Ny filohan'ny birao sy fizahan-tany afrikanina dia mitsidika an'i Tanzania avaratra ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filohan'ny birao sy fizahan-tany afrikanina dia mitsidika an'i Tanzania avaratra ankehitriny
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News
Ny filohan'ny birao sy fizahan-tany afrikanina dia mitsidika any Tanzania.
Ny filohan'ny birao fizahantany afrikanina, Andriamatoa Cuthbert Ncube, dia niaraka tamin'ny ekipa ATB Ambassadors tamina fitsangatsanganana familiarization tao Avaratr'i Tanzania taorian'ny nanafihany ny Expo Fizahan-tany momba ny fizahantany afrikanina voalohany omaly alatsinainy 11 oktobra 2021.
Nanomboka teo am-pototry ny tendrombohitra Meru any amin'ny faritra Arusha ny fitsidihana.
Avy eo dia nanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny fandaharanasa fizahan-tany ara-kolontsaina Tengeru izy ireo avy eo izay natokana hitandrovana ny tontolo iainana ao amin'ny tendrombohitra Meru.
Ny talen'ny ATB sy ny tariny dia hitsidika ny faritra amin'ny faritr'i Kilimanjaro eo am-pototry ny Tendrombohitra Kilimanjaro mandritra ny fitsangatsanganana ataon'izy ireo hatrany.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Ny filoham-pirenena sy ny ekipan'ny Masoivohon'izy ireo dia nanomboka ny diany androany teny amin'ny tehezan'i Mount Meru any amin'ny faritr'i Arusha tamin'ny fitsidihana tamim-panajana ny Tengeru Cultural Tourism Program, ivon-toerana izay natsangana handamina sy hanome fitsangatsanganana ara-kolontsaina.
Ny Tengeru Cultural Tourism Program dia natokana ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin'ny tehezan-tendrombohitra Meru, tampon'isa faharoa avo indrindra ao Tanzania. Ity programa ity dia natokana ihany koa hanintona ireo mpizahatany eto an-toerana sy avy any ivelany liana amin'ny fandaniana ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary avy eo manome an-tsitrapo ny tenany handray anjara amin'ny fampandrosoana ireo tetik'asa sosialy sy toekarena samihafa hahasoa ny mponina ao an-toerana.
Eo anelanelan'ny Mount Meru sy Mount Kilimanjaro, Arusha National Park dia toerana iray hafa manintona ireo mpizahatany, izay nahitana ireo mpandray anjara tamin'ny kaonferansa taorian'ny fivoriany tao an-tanànan'i Arusha. Eo anelanelan'ny tendrony avo indrindra mifaninana sy mitazana ny tampon'ny Tanzania Avaratra, ny Arusha National Park dia manome fialofana haingana ho an'ireo olona mitady hiala sasatra amin'ny faran'ny herinandro, izay avy amin'ny tanàna be olona toa an'i Arusha sy Moshi any avaratr'i Tanzania.
Ny valan-javaboary dia manjaka indrindra amin'ny tendrombohitra Meru, izay 4,566 metatra (14,980 metatra), no tendrombohitra avo indrindra faharoa ao Tanzania. Ilay park dia mitazana ny lemaky ny Kilimanjaro andrefana eo amin'ny tehezan-tendrombohitra Meru izay manome fitsangatsanganana safari mandeha amin'ny ankamaroan'ny mpitsidika avy any Tanzania, Afrika Atsinanana, ary ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Fantatra indrindra amin'ny farihy 7, ny farihy Momella ao anatin'ny fari-taniny, ary ny maro an'isa amin'ny buffaloes tranainy indrindra raha ampitahaina amin'ireo valan-javaboary hafa ao Tanzania.
Voasarona ao anatin'ny iray andro, ny Mount Kilimanjaro, tendrombohitra avo indrindra any Afrika, dia tokana Toerana fitsangatsanganana mpizahatany tanzaniana, mahasarika mpihanika 60,000 eo ho eo isan-taona. Ny Mountain dia maneho ny sarin'i Afrika manerantany, ary ny kontera simetrika rakotra lanezy dia mitovy dika amin'i Afrika.
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ny fanambin'ny fianarana momba, ny fizahana ary ny fiakarana an'io tendrombohitra miafina io dia naka sary an-tsaina ny olona erak'izao tontolo izao. Hatramin'izao, ny Tendrombohitra Kilimanjaro dia tandindon'ny hetsika, raharaham-barotra ary politika mihitsy aza ny firenena sy iraisam-pirenena. Ireo orinasam-pandraharahana sy klioba sosialy isan-karazany dia manana ny fisoratany mitondra ny anaran'i Mount Kilimanjaro hanehoana ny fisiany lehibe.
Tamin'ny 1961, ny sainan'i Tanzania vao nahaleo tena dia nakarina ho any an-tendrombohitra mba hanidina ambony, ary ny fanilo fanalalahana dia nirehitra teo an-tampon'ny handrisika ny fanentanana ara-politika ho an'ny firaisankina, ny fahalalahana ary ny firahalahiana.
Ny Mount Kilimanjaro dia mijanona ho marika sy reharehan'i Afrika amin'ny lazan'ny fizahan-tany azy. Ity tendrombohitra avo indrindra any Afrika ity dia voatanisa ao amin'ny toeran'ireo fizahan-tany 28 eran'izao tontolo izao noho ny fiainana mandritra ny androm-piainany.